थाई गुफामा फसेका बालकहरुको कसरी उद्धार गरियो? - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
थाई गुफामा फसेका बालकहरुको कसरी उद्धार गरियो?
अस्पतालमा उपचार्थ थाइ गुफामा फसेका बालकहरु
थाम लिङ्ग गुफाका कुनै भागहरु १० मिटरसम्म चौडा थिए भने कुनै भाग निकै साघुँरा थिए। बीचका भागहरुमा पानीले भरिएको थियो।
गुफामा फसेका बालकहरुलाई अक्सिजन पुर्याउन गएका अनुभवी थाई जलसेना गोताखोरको मृत्युले पनि मिसनलाई झन जोखिमपूर्ण बनाएको थियो।
बालकहरुको समूह र तिनका प्रशिक्षक गुफाको अवलोकन गरिरहेका बेला अचनाक परेको भारी वर्षाले मुलद्वार बन्द भएपछि उनीहरु गुफाभित्रै फसेका थिए। फसेको ९ दिनपछि जुलाई २ सोमबारका दिन उनीहरु गुफामा रहेको उनीहरुले प्रयोग गरेका साइकल र जुत्ताहरुका आधारमा पत्ता लागेको थियो।
सुरुमा हेर्दा गुफाभित्र उद्धार गर्नसक्ने अवस्था थिएन्। उद्धारकर्ताहरुले वर्षा मौसम नसकुञ्जेल उनीहरुलाई गुफा भित्रै आवश्यक समान सप्लाई गरेर राख्ने पनि योजना बनाएको थियो।
तर, त्यसो गर्दा महिनौं कुर्नुपर्थ्यो। ठूलो वर्षा हुने र पानीको शतह अझ बढ्ने मौसम पूर्वनुमान आएपछि जुलाई ८ आइतबारका दिन अप्रेशन सुरु गरियो।
बालकहरुलाई कसरी निकालिए?
श्वास फेर्ने उपकरणसहितका उद्धार गोताखोरहरु एकपछि अर्को पानीले भरिएका साघुँरा गल्लीहरुलाई छिचोल्दै उक्त समूहकोमा पुगेको थियो।
त्यसरी नै बालकहरुलाई त्यहाँबाट निकाल्नु थियो।
दुई जना गोताखोरले एक बालकलाई निकाल्ने जिम्मा लिए। एक जनाले बालकको शरिरमा र अर्काले शरिरको खुट्टाको भागमा समाते। अध्यारोमा स्थानमा भने गोताखोरहरु डोरीको साहरामा अघि बढ्ने गर्थे।
उद्धारमा सहभागी एक गोताखोरले भने, ‘बालकहरुलाई अध्यारो, चुनौतीपूर्ण, पानीभित्रको बाटोबाट निस्कनुअघि एकदमै उत्प्रेरित गर्ने कुराहरु भनिएको थियो।’
कतिपय यस्ता साघुँरा ठाउँहरु थिए। जहाँ अक्सिजन र मानिसहरुसँगै अघि बढ्न सक्दैन थिए। त्यस्ता स्थानहरुमा अक्सिजनको ट्याङ्कहरु पिठ्युबाट निकाल्दै एक गोताखोरले अगाढीबाट समातिदिन्थ्यो भने अर्काले बालकको पछाडीबाट अघि बढ्न सहयोग गर्थे।
प्रत्येक बालकलाई पूरा मुख ढाक्ने माक्स दिइएको थियो। जुन पहिलोपटक पौडी खेलिरहेका लागि सजिलो उपकरण मानिन्थो।
डुब्की लगाउँदै बालकहरुलाई उद्धार गर्ने विकल्पलाई कैयनले निकै खतरापूर्ण हुने बताएका थिए। तर, गोताखोर विज्ञहरुले उक्त खतराका बाबजुद पनि भारी वर्षात भएर अझै पानी गुफाभित्र छिर्दै तहसनहस हुनुअघि नै बालकहरुको उद्धार गर्न जोड दिए।
गुफाभित्र विभिन्न स्थानमा पानी भरिएकाले ती स्थानहरु पार गर्न कम्तिमा १० देखि १५ मिनेटसम्म पानीमा हिड्दै, पौडी खेल्दै बाहिरिनुपर्थ्यो। सघुँरो भागहरुबाट अघि बढ्नुपर्ने र सम्हालियर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले बाहिर निस्कदा घन्टौं समय वित्ने गथ्र्यो।
उद्धार मिसन ८ जुलाई आइतबारबाट सुरु भयो। गोताखोरहरु स्थानिय समयानुसार बिहान १० बजे गुफाभित्र प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुलाई पहिलो बालक निकाल्दा साँझ ५ बजेर ४० मिनेटमा भएको थियो। साँझ ७ बजेर ४५ मिनेटसम्म उनीहरुल थप तीन जना बालकलाई निकालेका थिए।
ती बालकहरुलाई बाहिर निकालुञ्जेल उनीहरु केहीमात्रामा मात्रै होशमा थिए। लगत्तै चार जनालाई अस्पताल लगियो। त्यसरात अक्सिजनका ट्याङ्कहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले उद्धार कार्य हुन सकेन्। सोमबार पुनः सुरु भएको उद्धारकार्यबाट अर्का चार जनालाई निकालियो।
गुफा बाहिर पानी तान्ने मेसिनले गुफाभित्रको पानी निकाल्ने क्रम जारी थियो। उक्त उद्धारको नेतृत्व गरिरहेका गुफा अवस्थित राज्यका गभर्नर चियाङ्ग राईका अनुसार सोमबारसम्म गुफाभित्रको पानी निकै घटिसकेको थियो। फलस्वरुप अघिल्ला दिनहरु भन्दा गुफाभित्रका धेरै भागहरु हिड्न मिल्ने भइसकेको थियो।
र, जुलाई १० अर्थात मंगलबार फसेको १७ दिनपछि अन्तिम चार बालकहरु र उनका प्रशिक्षकलाई पनि निकालियो।
गुफाभित्र के के खतरा थिए?
११ देखि १७ उमेरसमूहका बालकहरु र उनका २५ वर्षिय प्रशिक्षक एउटा सानो चट्टानको तलपट्टी झुकेर बसेका थिए। बातावरण चिसो थियो। हाइपोथर्मिया(चिसोबाट लाग्ने रोग)बाट जोगाउन उनीहरुलाई न्यानो बनाउन जरुरी थियो।
ती बालकहरु फसेको स्थानको अक्सिजन स्तर पनि अन्य ठाउँको तुलनामा निकै कम थियो। अधिकारीहरुका अनुसार गुफाको अन्य ठाउँमा औषतमा अक्सिजन २१ प्रतिशत थियो भने त्यसस्थानमा अक्सिजन १५ प्रतिशतमा झरेको थियो।
सोही कारण अक्सिजनको मात्रा पुर्याउन उद्धारकर्ताहरुले सय ट्याङ्क अक्सिजन गुफाभित्र सप्लाई गरेका थिए।
थाई गोताखोर पीयो सामन तिनै अक्सिजन पूर्याउने मध्येका एक थिए। तर, फर्कने क्रममा प्रर्याप्त अक्सिजनको अभावमा उनको ज्यान गयो। साघुँरो भागमा अक्सिजनको कमीका कारण बेहाश भएका उनी बिउझीएनन्।
बालकहरुले के के सहयोग पाए?
गुफामा फसेको ९ दिनपछि जुलाई २ सोमबारका दिन उनीहरु गुफामा रहेको पत्ता लागेको थियो। अर्को दिन मंगलबारसम्म उनीहरुलाई अत्यावश्यक खाना, मेडिकल सामाग्री, सिटामोलहरु पुर्याइयो। उद्धारकर्ताहरुले बालकहरुको शक्ति र पौष्ट्रिक स्तर बढाउने औषधीहरु पनि पुर्याइसकेका थिए।
उक्त अपरेशनका थाई जलसेनाको नेतृत्व गरिरहेका रियर एडमिरल अर्पाकोर्नका अनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा उनीहरुलाई सजिलै पाच्न सक्ने र उच्च शक्ति प्रदान हुने औषधि र भिटामिनहरु दिइएको थियो।
अधिकारीहरुका अनुसार सुरुमा उद्धारकर्ता पुग्दा उनीहरुमध्ये केहीमात्रै कमजोर देखिन्थे। केहीलाई मात्र सामान्य चोट लागेको थियो। अन्य ठिक थिए।
उनीहरुले मानसिक तनावलाई कसरी झेले?
सुरुमा केही बालकहरुसँग भएको मोबाइलमा टर्चलाईट थियो। तर, चार्ज सकिएसँगै तिनीहरु लामो समय अध्यारो गुफामा बसे।
त्यसैले उद्धार टिमले सुरुमा उक्त स्थानमा प्रकाशको व्यवस्था मिलाए र समूहसँगै आफूपनि बसे। उद्धारकर्ताहरुले बालकहरुका अभिभावकले प्रेषित गरेका चिठ्ठीहरु पनि ल्याएर दिए। जसले उनीहरुलाई मानसिक तनाव झेल्ने तागत दियो।
‘उनीहरु मानसिक रुपमा स्थिर देखिए, जुन निकै राम्रो भयो,’ बेल्जियमका गोताखोर बेन रोएमेन्छ्स भन्छन्, ‘भाग्यवश प्रशिक्षकले पनि उनीहरुलाई टुट्न दिएनन्। आफ्नो उर्जालाई बचाई राख्न उनीहरु एकजुट भएर बसे। त्यसले नै उनीहरुलाई पुर्नजन्म दियो।’
प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार | 2018-07-11 22:40:03